शान्तिसम्झौताको ११ वर्षः प्रतिवद्धता अनुसार काम भएन - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
| २७ कार्तिक २०७५, मंगलबार
सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको मंगलबार ११ वर्ष पूरा भएको छ। ५ मंसिर ०६३ मा मा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो। त्यससँगै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो।
विस्तृत शान्तिसम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका सबै काममा खासै प्रगति भएको छैन। संविधान निर्माण प्रक्रियाको सञ्जालमा जेलिएको शान्तिप्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन।
द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ। राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन।
सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ। एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ। तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको खबर वीरेन्द्र ओलीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन्।
तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रस्ट बनाइएको छ। शान्तिसम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, संगठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ। संविधान निर्माणसँगै तीन तहका सरकारको कल्पना गरिएको थियो। जसमध्ये प्रदेश र संघको निर्वाचन १० र २१ मंसिरमा हुँदै छ।
तर १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भत्किएका भौतिक संरचना अझै अलपत्र छन्। यसबीचमा १० वटा सरकार गठन भएका छन्। तर, भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वमा ३८ अर्ब ३३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँका कुल १३ हजार ७ सय ७७ संरचनामा क्षति भएको थियो।
जसमध्ये अहिलेसम्म १३ अर्ब ६९ करोड ८० लाख ४१ हजार रुपैयाँबराबरका ४३ सय ३५ संरचनाको काम सम्पन्न भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्वन्द्वउत्तर शान्ति पुनर्निर्माण परियोजनाका इन्जिनियर रामाशीष यादवले बताए। अझै २४ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख ९ हजार ४ सय ४२ आयोजना बनाउन बाँकी छ।
प्रकाशित ५ मंसिर २०७४, मंगलबार | 2017-11-21 07:19:49
प्रकृतिको मूल्य सवा करोड अर्ब !
घट्दै गएको वन्यजन्तुको संख्याले पृथ्वी र यसको स्रोतसाधन व्यापक दबाबमा परेको संकेत गरेको छ।
युवाजति कालापहाडतिर, कर्णालीका गाउँ युवाविहीन
दसैंतिहारजस्ता ठूला पर्व सकिएसँगै कर्णाली प्रदेशका बस्ती खाली हुन थालेका छन्।
सबै ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइँदै, मन्त्रालयहरुको भूमिका कमजोर हुने
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न र कार्यकारी बनाउन मुलुकका सबै ठूला विकास निर्माण आयोजना आफूमातहत राख्ने कानुनी व्यवस्था...
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई नयाँ गाडीकै मोह
सरकारी कार्यालयहरूमा हजारौं सवारी साधन थन्किएका छन्। ती बिग्रेका र थोत्रिएका पनि होइनन्।
तनावमा आमिर खान, केही वर्ष फिल्म नखेल्ने !
थ्री इडियट्स, पिके, दंगलजस्ता सुपरहिट फिल्मका कारण दर्शकले आमिर खानबाट निकै आश गर्छन्।
देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दीः सुजाता निवासमा सात नेताको भेला
१४ औ महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न कांग्रेस पूर्वसंस्थापनका नेताहरुले सक्रियता वढाएका छन्।
डिसेम्बर ११ मा सार्वजनिक हुने पाँच वटा प्रदेशको चुनाव परिणामसँगै भारतका विपक्षी र सत्तारुढ पार्टीको चुनावी रणनीति अझै प्रखर हुनेछ, जसले लोकसभा चुनावको परिणामको छनक दिनेछ।
विज्ञान–प्रविधि: कोरियालाई हेरौं, इराकको बाटो हिंडौं
उहिलेको तिहार पो तिहार, अहिलेको के तिहार
दिल्ली सरेकाे पाइलट दिदीभाइको भाइटीका
बबिता तामाङ काठमाडौं, - भाइटीकामा दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई उपहार दिने चलन सामान्य नै हो। तर पाइलट दिदीभाई कोमल र शुभवको हकमा यो नियम लागू हुँदैन।
जसको भाषण क्यासेट ‘ब्ल्याक’ मा बिक्री हुन्थ्यो
झ्याली पिटेर यसरी फुक्थ्यो पञ्चकमा राजाको जूवा
विदेशमा स्वदेशको नाम चम्काउने, पदक विजेता कुनै खेलाडीले कस्तो महसुस गर्छ? ग्रेटवालमा रञ्जना लिपि देख्दा मजस्तो एक नेपालीका मनमा कस्तो भावना छचल्कियो? भनिरहनु पर्ला र?
९५ प्रतिशत बलात्कारका घटनामा राजनीतिक संरक्षण छ
एजेन्सी कार्तिक २५ - टेलिभिजन स्टुडियोमा बसेर रोबोटले समाचार पढिरहेको दृश्य आफैँमा एउटा अपत्यारिलो घटना हो।
अन्तरिक्षबाट ह्वेल माछाको गणना
कार्तिक १५ - वेलायती वैज्ञानिकहरुले अन्तरिक्षबाट ह्वेल माछाको संख्या गणणा गर्न सकिने बताएका छन्।
किन वढ्दैछ नेकपामा शिथिलता ?
नीलाम्बरको ‘भाग्य’ मा दुई केपीको संयोग
कांग्रेस निकट बुद्धिजीवीका रुपमा रहेको उनको छविको उपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आचार्यलाई सो समूहको सदस्य चयन गरेका थिए। तर, उनी भित्री रुपमा...
मन्त्रिपरिषद बैठक लगत्तै निर्णय सार्वजनिक नगर्ने निर्णयमा किन पुगे प्रम ओली?
‘पारदर्शिताका नाममा उही दिन सार्वजनिक गर्दा एकातिर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम हुन थाल्यो, अर्काेतिर आफ्ना निर्णय कत्तिको परिपक्व छन् भनेर...
केशव स्थापितकोमा पुगेका दुई सांसदलाई घरमा भोजन, बाटोमा ढुङ्गा
पूर्वमन्त्री केशव स्थापितको घरमा भोजन गरेर फर्कने क्रममा प्रदेश सभाका दुई सा‌ंसद चढेको गाडीमा ढुङ्गा प्रहार भएको छ।
के माछामासु नखाने मानिस बढी बाँच्छन्?
विश्वमा माछामासु दूध दही नखानेहरुको जनसंख्या बढ्दो छ। पश्चिमा मुलुकहरुमा भेगन हुने लहर नै चलेको छ।